Sidee aqoonyahannada u fasireen dagaalka ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Sidee aqoonyahannada u fasireen dagaalka ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble?
Sidee aqoonyahannada u fasireen dagaalka ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble?
Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble ee soo shaac baxay kadib markii labada mas’uul ay isugu jawaabeen qoraallo lasoo mariyey warbaahinta.
Prof. Maxamed Xaaji ingiriis oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafkaan uu sabab u yahay Dastuurka ku meel gaarka ah oo mugdi galinaya awoodaha madaxda sare.
“Khilaafkaan waxaa keenya dastuurkii oo u qoran si mugdi ku jiro oo madaxweynihii iyo ra’iisal wasaarihii awoodoodii aan si cad u kala xadeynin, oo madaxweynihii muxuu awood leeyahay ra’iisal wasaarihii muxuu awood leeyahay,” ayuu yiri Prof. Maxamed Xaaji ingiriis.
Sidoo kale, Daahir Qoriyow Isaaq oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, ayaa BBC-da u sheegay in hadalkii ka soo baxay madaxweyne Farmaajo iyo kan ka soo baxay ra’iisal wasaare Rooble uu muujinayo khilaaf labadooda u dhaxeeye hase yeeshee wuxuu intaa ku daray in haddiiba uu jiro khilaaf heerkaan ah ay tahay in baarlmaanku soo soo fara geliyo.
Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay xiliga khilaafkaani uu soo shaac baxayo oo ah wakhti dalku marayo meel xasaasi ah oo doorasho loo jiheysanyahay.
“Haddii ra’iisal wasaaruhu ka soo daba hadlay madaxweynaha waxay tusinaysaa khilaaf dowladda dhexdeeda ah ra’iisal wasaaraha uu fulintii ah iyo madaxweynaha oo ah madaxweynihii qaranka,” ayuu yiri Daahir Qoriyow.
Sida ay ogaatay Badweytims wareegtada Farmaajo ayaa la doonayey in looga hortago heshiis ganacsi oo la filayo in ra’iisul wasaare Rooble uu la saxiixdo dowladda Kenya.
Xogta ay heshay Badweytims ayaa sheegeysa in Rooble uu doonayo inuu dib u fasaxo qaadka Kenya ee la keeni jiray Soomaaliya, oo ay horey u xayirtay xukuumadda, si qaadka dalka Ethiopia loogu furo ganacsato ehel la ah madaxweynaha.
Rooble ayaa waxaa bilihii tegay cadaadis xooggan saarayey ganacsatadii horey u keeni jiray qaadka oo ka codsaday in ganacsiga qaadka laga dhigo mid xor ah, oo aan qoys gaar ah u xirneyn, taasi oo sida la sheegay uu Rooble aqbalay.
Previous articleMaxaa xiga tallaabada uu qaaday ROOBLE ee uu kaga horyimid qorshaha Farmaajo?
Next articleBarcelona Oo Isku Dayday In Ay Lionel Messi U Diido Ku Biirista PSG, Qaab Noocee Ah. – Banaadirsom